မျက်လုံးစိမ်းကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ - ငါဘယ်အရောင်တွေကိုကြိုက်သလဲ။ | Bezzia
Susana godoy | 08/06/2021 14:00 | ဆောက်တည်ပုံ
မျက်လုံးအစိမ်းကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမည်ကိုသင်သိပါသလား။ သူတို့ဟာအရှိဆုံးကာမဂုဏ်နှင့်အသည်းအသန်အသွင်အပြင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအတွင်းမှာကျနော်တို့ကိုလည်းအမျိုးမျိုးသောအစိမ်းရောင်အရိပ်ရှာတွေ့ပေမယ့်နေဆဲသင်၏မျက်စိပို။ ပင်ပိုမိုပြင်းထန်စေရန်သင်၏အကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်များထားခဲ့ပါကြောင်းမှန်သည်။
သင်တွေ့ပြီဟုထင်လျှင်မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်မရပါ။ သင်၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုအပြည့်အဝရယူနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များကိုသင့်အားပေးမည်။ မိတ်ကပ်သည်နေ့ရောညပါအချိန်တိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာများကိုပိုမိုပြင်းထန်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မပြုလုပ်သောအရာများကိုဖုံးကွယ်ရန်ကူညီသည်။ စီးပွားရေးကိုဆင်းကြပါစို့
မျက်လုံးမိတ်ကပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ချင်သောလုပ်ငန်းစဉ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အိပ်မက်မက်ခဲ့သလိုပဲအမြဲတမ်းအံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်ပါဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအချိန်အနည်းငယ်သာပေးနိုင်မည့်တစ်ဆင့်ချင်းသင့်အားစွန့်ခွာသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်အလုပ်သို့သွားပါစေ!
အရေပြားကိုပြင်ဆင်ခြင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏မျက်နှာနှင့်၎င်းနောက်မှရွေးချယ်ထားသောအုတ်မြစ်သို့မဟုတ်မိတ်ကပ်အတွက်မိတ်ကပ်လိမ်းဆေးအနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုရန်သတိရပါ။ မျက်ခုံးနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါအရိပ်များပိုမိုအရောင်ပြောင်းသွားရန်နှင့်ကြာရှည်ခံရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော primer အချို့လည်းရှိသည်။
ယခုသင်ရမည် တူညီတဲ့အရိပ်အရောင်အနည်းဆုံးနှစ်ခုအရိပ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ မိုဘိုင်းမျက်ခွံတစ်ခုလုံးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးအရောအနှောဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
မျက်လုံး၏အမဲကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအမည်းရောင်အရောင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာပေးမည် ၎င်းသည်ဗိမာန်တော်ဆီသို့ ဦး တည်သွားပြီး၎င်းကိုခြံဝင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ်တွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ ဒီနောက်ဆုံးinရိယာမှာလိုင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုမှုန်ဝါးလိမ့်မယ်။
သင့်အရိပ်ကိုလျှောက်ထားလိုက်လျှင်၎င်းသည်အချိန်တန်ပြီ တစ် ဦး eyeliner ရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းသည်ခဲတံသို့မဟုတ်အရည်ဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အထက်ပါမျဉ်းကိုဆွဲပါလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ mascara နည်းနည်းသုံးတာနဲ့တူတယ် မျက်စိပိုမိုအသံအတိုးအကျယ်ကိုပေးရန်။
၎င်းသည်ခဲတံတစ်လုံး၊ အရည်သို့မဟုတ်ဂျယ်လ်ပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်ကြောင်းကို eyeliner တစ်ခုအနေဖြင့်သင်သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သိမ့်မှုကိုအမြဲလိုက်နာသင့်သည်မှာမှန်ပါသည်။ ဂျယ်လ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းအနည်းငယ်မှုန်ဝါးအောင်ပြုလုပ်ရပေမည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လူတိုင်း၏အရသာနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။ သင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျက်လုံးအစိမ်းရောင်ဘယ်လိုပုံဖော်ရမယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အထင်ရှားဆုံးသောအရောင်များနှင့်သင်နေဖို့ဖြစ်တယ်။
အနက်ရောင်အရောင်က၎င်းကိုပြင်းထန်စွာပေးပြီး Smokey Eyes ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ သင်၏အကောင်းဆုံးညများနှင့်အရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များ၏ကြယ်ပွင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ကြောင်း smoky စတိုင်။ သငျသညျသဘာဝပိုချင်လျှင်, သင်အမြဲရွေးချယ်နိုင်ပါသည် မျက်မှန်စိမ်း ကြောင်းကြည့်အလေးပေးဖော်ပြသည်။ သငျသညျလစျြလြူရှုနိုငျသညျ့ eyeliner အရောင်များကိုနောက်ထပ်တစ်ခုအညိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းသို့မဟုတ် grayish တန်ချိန်အကြံပြုသည်မဟုတ်။
မျက်လုံးအစိမ်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ ၎င်းတို့အတွက်မည်သည့်အရိပ်သည်ပြီးပြည့်စုံသနည်း။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ကြိမ်ထက်မကသင်ကိုယ်တိုင်ဤမေးခွန်းကိုမေးခဲ့ဖူးသည်မှာသေချာပါသည်၊ ဤမျက်လုံးအရောင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်တန်ချိန်များ၏အရိပ်များကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်မှာမှန်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကသူတို့ကိုပိုပြီးထွန်းလင်းစေချင်တယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဘာမှမထူးဘူး ရွှေရောင်အရောင်များကမင်းမျက်လုံးများအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပန်းရောင်လည်းအကောင်းဆုံးမဟာမိတ်များနှင့်ခရမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်လူတိုင်း၏နှုတ်ခမ်းတွင်အမြဲရှိနေသည်မှာအမှန်ပင်။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအသံမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းကိုပိုမိုသဘာဝအရပေါင်းစပ်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်မဟုတ်ပါ။
သင်လျှောက်လိမ့်မည် အားလုံးမျက်ခွံကျော်တစ် ဦး အလင်းမီးခိုးရောင်အရိပ်.
သင်တစ် ဦး နှင့်အတူဆနျ့ကငျြဘစေနိုင်သည် aubergine အရောင် (သို့) မီးခိုးရောင်အရိပ်။ ၎င်းသည်မျက်စိ၏အပြင်ဘက်အဆုံးသို့သွားပြီးအလယ်သို့တက်သွားပြီးကောင်းမွန်စွာမှုန်ဝါးသွားစေသည်။
မျက်ခုံးအလယ်မှမျက်ရည်ပြွန်ဆီသို့ ဦး တည်သွားသည်နှင့်အရောင် ပြန်၍ ကြည်လင်လာသည်။ အဆိုပါမျက်ရည်ပြွန်ထဲမှာ illumination တစ် ဦး ထိတွေ့မှုနှင့်အတူ။
မျက်ခွံတစ်ခုလုံးကိုကောင်းစွာရောနှောရန်သန့်ရှင်းသော brush ကို ဖြတ်၍ တွန့်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။
မှောင်မိုက်အရိပ်နှင့်အတူလိုင်းနှင့် mascara လျှောက်ထားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » ဆောက်တည်ပုံ » မျက်လုံးစိမ်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
သေးငယ်တဲ့မီးဖိုချောင်တွင်သိုလှောင်မှုတိုးမြှင့်ဖို့5လှည့်ကွက်